Nicholas Kay oo booqasho ku tegay Hargeysa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Nicholas Kay oo booqasho ku tegay Hargeysa
A warsame 18 August 2014 19 August 2014
Mareeg.com: Madaxa Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Nicholas Kay ayaa saaka gaaray magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska UNSOM.
Nicholas Kay ayaa ku tegay Hargeysa casuumad uu ka hekay maamulka Somaliland. Waxa uu ka soo kicitimay Garoowe oo uu shalay kulamo kula qaatay Madaxweynaha Maamulka Puntland.
War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay inuu danjiraha la kulmi doono madaxweynaha Somaliland, Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanayo iyo xubno ka tirsan golaha wasiirrada maamulka si ay uga wada hadlaan kordhinta taageerada Qaramada Midoobay ay siiso Somaliland iyo xoojinta xiriirka u dhaxeeya labada dhinac.
Wasiir ku xigeenka Arimaha dibada Somaliland Mawliid Maxamed Ibraahin, oo Madaarka Hargeysa ku soo dhaweeyay Ergayga ayaa sheegay inay Somaliland iyo Nicholas kay ka wada shaqaynayaan arimaha bani’aadanimo
“Waxaanu soo dhaweynaynaa Nicholas Kay oo ah U qaybsamaha Somaliland iyo Somalia ee Qaramada Midoobay. Waa markii labaad ee uu halkan yimaado mudo sanad iyo bil ah. Sidaad ogtihiin Xafiiskan UNSOM waxa uu leeyahay laba qaybood oo kala ah Siyaasadda iyo bani-aadanimada, sidaasi darteed mar walba waynu ka tirsanahay xafiisyadan Hargeysa ee uu isagu maamulo, markaa dhinaca aynu sida xooggaha uga wada shaqayno waxa weeye dhinaca Arimaha bani-aadanimada” ayuu yiri wasiir xigeenka khaarajigu.
Amb: Nicholas Kay oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay imaanshiyihiisa Hargeysa, isagoo tilmaamay inuu kulamo la yeelanayo Madaxweyne Siilaanyo iyo badi wasiiradiisa.
“Waxaa farxad weyn ii ah inaan Hargeysa mar labaad imaado, waxaan joogi doonaa ugu yaraan maanta, waxaan la kulmi doonaa Madaxweyne Siilaanyo iyo Wasiiro badan.waxa aan la kulmi doonaa Madaxda Qaramada midoobay ee Somaliland ka shaqeeya, waxaanan kala hadli doonaa sida ay bulshada somaliland ula shaqaynayaan” ayuu yiri Mr Kay.
Kenya oo 100 weerar kala kulantay Alshabab
Horjooge burcad badeed & hubkiisa oo lagu qabtay Muqdisho